Ho an’izay vaovao :) – Tsiky dia Ampy – Dev
Ho an’izay vaovao :)
Pubblicato maggio 25, 2004 febbraio 8, 2006 da hery
Manararaotra mampita fotsiny aho ho an’izay vaovao eto amin’ny serasera.org sy ho an’ireo izay liana te hahalala amin’ny teny fohy ny zava-misy ato amin’ny serasera.org
– http://lisitra.serasera.org dia misy ny zavatra momba ity lisitra izay andraisanao ity hafatra alefako ity. Ny fandefasana hafatra dia serasera@yahoogroupes.fr izany hoe resaka email. Voarainao any aminao ny hafatra rehetra mandeha. Misy mpikambana 720.
– http://namana.serasera.org dia toerana hifandraisana amin’ireo namana Malagasy, tanora sy antitra, lahy sy vavy, amin’ny toerana iray. Ity indray dia miafina tanteraka ny email ary fifandraisana manokana amin’ny mpikambana tsirairay no ataonao. Misy mpikambana 3590.
– http://hira.serasera.org dia toerana fihainoana hira Malagasy izay alefan’ny RadioVazoGasy (http://vazogasy.ekzay.org) Misy hira Malagasy eo amin’ny 2200 eo ho eo. Tsy mila fisoratana anarana. Isaky ny alahady dia misy hiram-pivavahana ranoray mandritra ny adin’ny iray.
– http://forum.serasera.org dia toerana hifampidinihana ihany koa. Dinika voasokajy araky ny lohahevitra. Misy hafatra 38565 nosoratan’ny namana 944.
– http://tononkira.serasera.org dia toerana misy ireo tononkira Malagasy nampidirin’ny mpitsidika. Misy mpihira malagasy 457 sy tononkira 2105.
– http://vetso.serasera.org dia toerana misy ireo tononkalon’ny namana mpanoratra. Efa misy tononkalo eo amin’ny 397.
– http://chat.serasera.org dia toerana hahafahana mitafa mivantana amin’ireo namana. Misy eo amin’ny namana 25 eo amin’ny ankapobeny miara-miresaka mivantana.
Ireo rohy rehetra ireo dia hitanareo ao amin’ny http://serasera.org ery ambony havia ery.
— Pour agir contre les virus —
*** Ne conserver pas les adresses emails dan Outlook Express
*** Ne cliquez pas sur répondre pour m’envoyer un email
*** Prenez la peine de réecrire mon adresse
*** Signer avec un sourire de tda
— Merci d’ajouter ceci dans votre signature
“Tsiky dia ampy”
Tel: 0039 338 744 2412
Precedente Andrana email
Xavier su Ok hatory kely aloha